အသားအရေစိုပြေတင်းရင်းနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲသိလား? | CosmeticMyanmar
Home » Article » အသားအရေစိုပြေတင်းရင်းနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲသိလား?
ဟေးချစ်တို့ရေအသားအရေညိုညစ်ပြီးအရေးအကြောင်းတွေပေါ်နေလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား? အခုပဲအဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေကိုဖယ်လိုက်ပါတော့ Cosmetic Myanmar ကနေပြီး ပျိုမေတို့အတွက်ရာနှုန်းပြည့်အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ All in one snail repair cream လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
Snail ဆိုတာနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြောပြစရာမလိုလောက်အောင်ပျိုမေတွေသိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ ဒီပစ္စည်းလေးမှာဆိုရင်ဖြင့် snail အဓိကပါဝင်တဲ့အပြင်သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုတွေနဲ့လည်းပါဝင်ဖေါ်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ cream လေးရှိရုံနဲ့တင်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်။ အသားအရေမညီခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အရေးအကြောင်းတွေပေါ်လာလို့ပဲဖြစ်စေ၊ ချွေးပေါက်တွေကျယ်လာပြီး အသားအရေကြမ်းတမ်းလာပါစေ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူး သူရှိနေပြီလေ….. ဒီ creamလေးဟာဆိုရင် အသားအ​ရေကြုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အားကိုတိုးမြင့်ပေးတဲ့အတွက် အရေးအကြောင်းတွေကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေတယ်။ ဆဲလ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဝက်ခြံတွေ၊ အမာရွတ်တွေကိုလည်းသက်သာပျောက်ကင်းစေတာပေါ့။ moisture အပြည့်အဝပါဝင်တာကြောင့်အသားအရေကိုကျန်းမာစေပြီး နူးညံ့စေပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ မျက်နှာတဝိုက်နဲ့လည်ပင်းကိုလိမ်းပေးပါ။ အသားအရေထဲပိုမိုစိမ့်ဝင်ဖို့ဆိုရင်ပျိုမေတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာပုတ်ပေးပါနော်။ မနက်နဲ့ညတကြိမ်စီအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ခြောက်တဲ့အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ moisture လေးအားဖြည့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဆိုင်သွားစရာမလိုဘဲအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူလုပ်လို့ရပြီပေါ့။
နောက်နေ့တွေမှာလည်းပစ္စည်းအသစ်အသစ်လေးတွေကို ဒီ Page မှာ ပြောပြပေးသွားမှာဆိုတော့ Like & Share လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Image Source : http://eng.mizon.co.kr/productlist.asp?v_ProdNum=&v_prod_CateNum=6
ထွေထူးဆန်းပြားတဲ့အရောင်လေးတွေသုံးပြီး သူတကာနဲ့မတူအောင် ဖလန်းနိုင်စေဖို့...............